राशि अनुसार तपाईको शुभ दिन(बार) कुन हो ? जान्नुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
धनु राशि– सोमवार र मंगलवार धेरै शुभ हुने गर्छ।मकर राशि–सोमवार र आइतबार धेरै शुभ हुने गर्छ।कुम्भ राशि– मंगलवार र शनिवार धेरै शुभ हुने गर्छ।मीन राशि– मिन राशिलाई सोमवार धेरै शुभ हुने गर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःगणेश भगवानको पुजा गर्दा यी ११ मन्त्र जप्नुहोस् मिल्नेछ शुभ लाभ !!ःहिन्दूधर्मअनुसार, मंगलबार गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ ।साथै यस दिन काली माता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पूजा गरिन्छ । यस दिन व्रत बस्दा बिहानको खाना खानु हुँदैन भने साँझको खानामा नुन मिसाउनु हुँदैन ।सबै किसिमको सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रु दमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मंगलबारको व्रत उत्तम मानिन्छ
विशेष गरेर गणेश भगवानको पूजा मंगलबार हुने गरे पनि हरेक दिन सबैभन्दा पहिले गणेशजीको पूजा गरेपछि मात्र अन्य देवतालाई पूज्ने चलन रहिआएको छ । मंगलबार भगवान गणेशको नाममा वर्त बस्ने र मन्दिर गएर विधिवत रुपमा गणेशजीको पूजा गर्ने गर्छन।
मंगल ग्रहलाई समस्याको निर्माता मानिने भएकाले यसको खराब प्रभावलाई जोगाउनको लागी पनि यस दिन वर्त बसी विधिवत रुपमा भगवान गणेशको पूजा आराधना गर्ने गरिएको हो ।
भगवान गणेशको पूजा गर्दा जप्नुपर्ने केही मन्त्रहरुःयी ११ मन्त्रहरु जप्दा गणेश भगवान् चाँडै प्रसन्न हुने र कृपाले जीवनमा सफलता मिल्ने विश्वास छ । १ श्री गणेशाय नमः २ – ॐ श्री गणेशाय नमः ३ – गं गणपतये नमः ४ – ॐ गं गणपतये नमः ५ – ॐ गं ॐ गणाधिपतये नमः ६ – ॐ सिद्धि विनायकाय नमः ७ – ॐ गजाननाय नमः ८ – ॐ एकदंताय नमो नमः ९ – ॐ लंबोदराय नमः १० – ॐ वक्रतुंडाय नमो नमः ११ – ॐ गणाध्यक्षाय नमः
यो पनि पढ्नुहोस् ःजीवनमा सुख, शान्ति तथा सफलता प्राप्त गर्न चाहनु हुन्छ भने आचार्य चाणक्यको नीतिलाई आत्मसाथ गर्नुहोस् । आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीतिको प्रभावको माध्यमबाट नै चन्द्रगुप्त जस्तो सामान्य बालकलाई अखण्ड भारतको सम्राट बनाएका थिए । आचार्य चाणक्यले नीतिशास्त्रको रचना गरेका थिए । यही शास्त्रकाअनुसार हरेक बाबुले ध्यान राख्नु पर्ने केही नीतिबारे जानी राखौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःअमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टनको प्रेरक प्रशङ्ग ः गल्ती छिपाउने होइन, पाठ सिकेर अघि बढ !ःजर्ज वाशिङ्टन अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति हुन् । वाशिङ्टन ६ वर्षको भएपछि बुवाले उनलाई एउटा सानो बन्चरो उपहार दिए । त्यतिबेला उनीहरुको जमिन निकै धेरै थियो ।
जमिनको कुनै कमि थिएन । जमिनमा खेतीपातीको लागि कयौं कामदारहरु राखिएका थिए । छोराले प्रयोगात्मक ज्ञान सिकोस भन्ने उद्धेश्यले उनले जर्ज वाशिङ्टनलाइ त्यो सानो बन्चरो उपहार दिएका थिए ।
बन्चरो पाएपछि वशिङ्टन निकै खुशी भए । बुवा आफ्नो काममा लागे । वाशिङ्टन भने बन्चरो लिएर बगैंचातिर दौडिए । अरुले बगैंचामा गोडमेल गरेको देखेको उनले धमाधम साना विरुवाहरु काट्न थाले ।
त्यसपछि उनलाई ठूलो रुख काट्न मन लाग्यो । वशिंटनले ठूलो रुखमा बन्चरो हान्न थाले । सानो बन्चरोले ठूलो रुख काटिन्थ्यो र ? उनले निरन्तर बन्चरो प्रहार गरे र थाकेपछि घर फर्किए ।
साँझपख जब वशिङ्टनका बुवा बगैंचामा पुगे । उनी रिसले आगो भए र चिच्याए । या सब कसले गरेको हो ? जसले गरेको हो म त्यसलाई छाड्दिन आज । वाशिङ्टनको सातो गयो ।
उनी लुरुलुरु वुवा छेऊ पुगे र रुदै भने, –‘यो सबै मैले गरेको हो बुवा ।’ वुवाले उनलाई काखमा लिए र भने, मेरो छोराले झुट बोलेको भए मलाई यो भन्दा बढि रिस उठ्ने थियो ।
मेरो छोराले नस्वीकारेको भए मलाई यी विरुवा काटीएको भन्दा बढि पिडा हुन्थ्यो । आफनो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने, आफ्नो गल्तीको दोष अरुलाई देखाउने व्यक्तिलाई हामी बाठो सम्झन्छौं तर,
वास्तवमा त्यो ढाकछोप र अरुमाथि लगाएको दोषले उसलाई जिन्दगीभर छोड्दैन । बुद्धिमान त त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छ ।गल्तीलाई स्वीकारेर अगाडी बढ्दा उसले माफी पनि पाउँछ । स्वच्छछवि रहन्छ र गल्ती सिकेर अगाडी बढ्ने मौका पाउँछ ।